Leah Remini anofunga kuti Tom Cruise achaedza 'kukwezva' Suri muScientology - Nhau
Kuru Macelebs Style Varaidzo Nhau
Leah Remini anofunga kuti Tom Cruise achaedza 'kukwezva' Suri muScientology
Kunyange Tom Cruise haasati aonekwa pachena nemwanasikana wake ane makore gumi nemana, Suri, mumakore, Leah Remini ane hunhu izvo zvese zvakagadzirwa.
Leah, aimbove Scientologist, anotenda kuti mutambi achaedza 'kukwezva' wechidiki, waanogovana naye Katie Holmes , kupinda muchitendero paanokwegura.
'Scientology inofunga Katie semunhu anodzvinyirira muvengi uye saka Tom anotenda, saScientologists ese, kuti haakwanise kubatana naSuri,' Leah akaudza New York Post . 'Ndine chokwadi chekuti tenzi wake akaronga kumirira kusvikira Suri akura kuitira kuti amukwezve muScientology uye kure naamai vake.'
Tom naKatie vakapatsanurana muna 2012 apo Suri aive nemakore matanhatu.
'Ndakaziva Katie paakanga ari (Scientology) uye airatidzika kunge akadzidziswa zvakanyanya munyika yaTom,' akadaro. 'Asi nekufamba kwenguva, uye ndakanzwisisa kuti sei aiita zvaakaita kuchengetedza mwanasikana wake ... Ndiri kungofungidzira kuti pane chimwe chibvumirano chekuchengetedza mwanasikana wake.'
Kufambisa / Shutterstock
Mutambi we 'King of Queens' akawedzera kuti 'anonyatso kudada' naKatie 'nekuburitsa mwanasikana wake mune chimwe chinhu chingadai chakanyanya kutyisa uye chine njodzi kwete kuna Suri chete asi nehukama hwavo.'
Kubva 2013, Leah ave akazviita basa rake kudzikisa Scientology , chitendero chaakakurira. Mushure memutambi Danny Masterson, mukurumbira Scientologist, anga ave mhosva yekubata vakadzi vatatu chibharo pakutanga kwegore rino, akatumira tweet, 'Ichi chingori kutanga kweScientology, mazuva ako ekupukunyuka ave kusvika kumagumo.'
Iyo 'Iyo' 70s Ratidza 'nyeredzi yakazivisa kusava nemhosva kuburikidza negweta rake.
Mwaka wadarika, Leah akataura nevapomeri vaviri vaDanny pamagumo eEmmy anokunda maA & E zvinyorwa, 'Scientology neKutevera.' Bvunzurudzo iyi yakaburitswa mushure mekunge vakadzi vana vaendesa kumatare edzimhosva kumutambi, Chechi yeScientology nemutungamiri wayo, David Miscavige, muna Nyamavhuvhu 2019 vachipomerwa kuvateya nekuvavhundutsira mukuedza kuvanyaradza mushure mekumhan'ara nyeredzi. Maererano ne Kuputika , mhosva yacho yakataura kuti chinamato ichi chakaita 'zano rekuviga kuti Daniel Masterson akarwisa vakadzi vana vadiki.'
Chechi yagara ichitaura ichipesana naRea, ichiti show yake izere 'nenhema, kukanganisa uye kukurudzira kuvenga nekusarura.' Chirevo gore rapfuura chakati, 'Leah Remini ane ropa mumaoko ake.'
Leah akabvuma kuti kereke ine simba kwazvo, asi anoramba kuramba akanyarara.
'Pakupera kwezuva, handikwanise kurarama hupenyu hwangu ndichitya kuita zvakanaka nekuti ndinotya kuti chimwe chinhu chichaitika kwandiri,' akadaro. 'Ndiri kureva, ndine mwanasikana ndipo pane pandinonyanya kunetseka. Handidi kuti mwanasikana wangu ambopinda mune izvi. '
Kim Zolciak ane pamuviri pemwana Nha. 7? Kwete nekukurumidza!
Matt Lauer anonzi ari kufambidzana neshamwari yakareba kwenguva yakareba Shamin Abas
bo derek john corbett kupatsanurwa
mel b pamberi nepashure
blac chyna pazera regumi nemana
beyonce naJay z kubvunzana